सूचना प्रविधि - Lite Nepal
नेपालमा नै खरिद गरेको फोनको आइएमईआई दर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा नै खरिद गरिएको मोबाइल फोनमा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमईआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । प्राधिकणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भइ नेपालमा नै खरिद भइ प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, […]
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको वेबसाइट ह्याक, ह्याकरको नियन्त्रणमा डेटा
विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको वेबसाइट ह्याक भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक भएको हो । उक्त वेबसाइटमा हन्टर उमेरले वेबसाइट ह्याक गरेको उल्लेख गरिएको छ । ह्याक भएपछि वेबसाइटमा लेखिएको छ, ‘विद्यार्थीहरु नतिजा परिवर्तनका लागि चिन्ता लिनु पर्दैन् । मात्र मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।’ जसमा सम्पर्कका लागि ह्याकरको फेसबुक आईडीको लिंक […]
बजारमा इन्टरनेटको प्रतिस्प्रधा, सुबिसुले तयार पा¥यो ४०० जीबीपीएस क्षमताको फाइबर नेटवर्क
काठमाडौं । सुबिसु केबल नेटले ४०० जीबीपीएस क्षमताको सिंगल अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरेको छ । नोकियासँगको सहकार्यमा नेटवर्क विस्तार गरेको हो । १५०० किलोमिटर पूर्व–पश्चिम फैलिएको सुबिसुको नेटवर्कमा उच्च गति क्षमताको फाइबर सोलुसन विस्तार भएको हो । बढ्दो इन्टरनेटको मागलाई सम्बोधन गर्न, उच्च गति तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न ब्रोडब्याण्ड सेवामा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने […]
के हो क्लब हाउस ? यसबाट पैसा पनि कमाउन सकिन्छ ?
काठमाडौं । विश्वभर सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जालमध्ये पछिल्लो समय नेपालमा क्लब हाउस एप चर्चित बन्दै गएको छ । धेरै नेपाली प्रयोगकर्ता यो सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । यससञ्जालमा प्रयोगकर्ता विभिन्न विषयमा आ-आफ्नै छुट्टाछुट्टै अनलाइन मिटिङमा ‘भ्वाइस’को माध्यमबाट जोडिन सक्छन् । यसमा प्रयोगकर्ताले आफूलाई मन लागेको समसामयिक […]
डिशहोमले २०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट दिने
काठमाडौं । डिशहोमले अब २ सय एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत ग्राहकलाई कम्पनीले २०० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भएको हो । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको डिशहोमका प्रवन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले बताएका छन् । अब नेपालको हकमा २०० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट प्रदान गर्ने डिशहोम नेपालकै पहिलो […]
स्मार्टफोन ह्याक भएको यस्ता संकेतबाट थाहा पाइन्छ !
काठमाडौं । प्रविधिको यस जमानामा सबै जना स्मार्टफोनको प्रयोग गर्छन् । यो उपकरणमा मानिसको महत्वपूर्ण कागजातहरु, तस्वीरहरु र बैंक अकाउन्ट नम्बर जस्तो महत्वपूर्ण जानकारी रहेको हुन्छ । तर कहिलेकाही स्मार्टफोन ह्याक हुन्छ , जसमा प्रयोगकर्ताको निजी जानकारी लिक गर्न मिल्छ । प्रायजसो मानिसहरुलाई यसको बारेमा थाहा हुन्छ । यस्तो संकेतले मोबाइल ह्याक भएको छ वा […]
बिहीबार जिमेल, ड्राइभ, गूगल डक, गूगल ग्रुप, गूगल च्याट, गूगल मिट, गूगल कीप तथा गूगल भ्वाइसमा समस्या देखिएको छ । नेपाल सहित विश्वका अन्य देशमा पनि यो समस्या देखिएको छ। त्यस्तै गूगल ड्राइभमा पनि फाइल अपलोड र डाउनलोड नहुने समस्या देखिएको छ । यस्तै गुगल डक्स र गुगल मिटमा कनेक्टिङको समस्या देखिएको छ। गुगलले प्राविधिक […]
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो गोपनीयता जोगाउन जान्नैपर्ने १० कुरा
काठमाडौं । के तपाईं आफ्नो फोनमा रहेका एपहरुमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ । हजारभन्दा धेरै एपहरुले नियमको उल्लंघन गर्ने र अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई भंग गर्ने गरेको विभिन्न अनुसन्धानबाट उजागर भइसकेको छ । यस्ता एपहरुले प्रयोगकर्ताको जानकारी बिना नै लोकेसन डेटा र फोन आइडेन्टिफायरहरु संकलन गर्ने गरेका छन् । यस्तो गतिविधिलाई रोक्न आजको समयमा कुनै […]
काठमाडौँ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा चार करोडभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण भएपछि दूरसञ्चार पहुँच तथ्याङ्कमा शत प्रतिशतभन्दा बढी देखिन थालेको धेरै भयो । सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सेवा प्रदायकले सिमकार्ड वितरणलाई बजार हिस्सा मान्न थालेपछि पछिल्लो एक वर्षयता मासिक तीन लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण हुन थाल्यो । तर सिमकार्ड बिक्रीमा दिनानुदिन बढ्दो ग्राफ यतिबेला […]
नेपाल टेलिकम विरुद्ध मुद्दा : २० घन्टा रिचार्ज सेवा अवरुद्ध हुँदा १५ हजार क्षतिपूर्ति
काठमाडौं । भक्तपुरका राजकुमार सुवाल नेपाल टेलिकमको पोष्टपेड मोबाइल सेवाका ग्राहक हुन । ०७५ भदौ २९ गते शुक्रबार साँझ ६ः४१ मा उनको मोबाइलमा टेलिकमबाट एउटा सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो,‘तपाईको तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स ४ हजार ५ सय ७३ रुपैंयाँ छ र तपाइँले उपभोग गर्न पाउने ब्यालेन्स ४ सय २६ रुपैंयाँ छ । सेवा बन्द हुन […]